Leoncelli - Italienisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: leoncelli (Italienisch - Burmesisch)
Essi ruggiscono insieme come leoncelli, ringhiano come cuccioli di una leonessa
ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ မြို့သားတို့ သည်ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ ဟောက်သောအသံ၊ ခြင်္သေ့သငယ်ကဲ့သို့ မြည်သောအသံကိုတညီတည်း ပြုကြလိမ့်မည်။
ခြင်္သေ့ပျိုတို့သည် လုယက်ခြင်းအလိုငှါ ဟောက် ၍၊ ဘုရားသခင့်ထံမှာ အစာကို ရှာကြပါ၏။
ခြင်္သေ့သည် သားငယ်များတို့ ကိုက်ဖြတ်လျက်၊ ခြင်္သေ့မတို့ လည်ပင်းကို ညှစ်လျက်၊ လုယူဖျက်ဆီးသော အကောင်များကို ဆောင်ခဲ့၍ မိမိမှီခိုရာတွင်းတို့ကို ပြည့် စေတတ်၏။
သိုးထိန်းတို့သည် မိမိတို့ အသရေပျက်သော ကြောင့်၊ မြည်တမ်းသောအသံကို ပြုကြ၏။ ယော်ဒန်မြစ် ၏ဂုဏ်အသရေပျက်သောကြောင့်၊ ခြင်္သေ့ပျိုဟောက် သောအသံကို ကြားရ၏။
သူသည်လည်း၊ ခြင်္သေ့တို့နှင့်ပေါင်းဘော်၍ ခြင်္သေ့ပျိုဖြစ်လျက်၊ တောတိရစ္ဆာန်တို့ကို ဘမ်းဆီးခြင်းငှါ၊ သင်၏လူတို့ကိုလည်း ကိုက်စား၏။
ရှေဘပြည်သား၊ ဒေဒန်ပြည်သား၊ တာရှု ကုန်သည်များ၊ ခြင်္သေ့ပျိုယူခြင်းငှါ လာသလော။ သူ့ ဥစ္စာကို ဝေငှ၍၎င်း သိမ်းသွားလျက်၊ များစွာသော လုယက်ဖျက်ဆီးခြင်းငှါ အပေါင်းအသင်းကို စုဝေးစေပြီ လောဟု မေးမြန်းကြလိမ့်မည်။
ကျန်ကြွင်းသော ယာကုပ်အမျိုးသားတို့သည် တပါးအမျိုးသား အများတို့တွင် နေ၍၊ ထာဝရဘုရား ပေးတော်မူသောနှင်းကဲ့သို့၎င်း၊ လူကို မငံ့လင့်၊ လူသားတို့ ၏ အလိုသို့မလိုက်သော မိုဃ်းရေကဲ့သို့၎င်း ဖြစ်ကြလိမ့် မည်။
perché io sarò come un leone per Efraim, come un leoncello per la casa di Giuda. Io farò strageeme ne andrò, porterò via la predaenessuno me la toglierà
အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် ဧဖရိမ်၌ ခြင်္သေ့ကဲ့သို့၎င်း၊ ယုဒအမျိုး၌ ခြင်္သေ့ပျိုကဲ့သို့၎င်း ဖြစ်မည်။ငါသည် ကိုယ်တိုင်ကိုက်ဖြတ်၍ သွားမည်။ ချီသွား၍ အဘယ်သူမျှ မနှုတ်ရ။
တောခွေးသည် သိုးသငယ်နှင့်အတူ နေလိမ့် မည်။ ကျားသစ်သည် ဆိတ်သငယ်နှင့်အတူ အိပ်လိမ့် မည်။ နွားသငယ်၊ခြင်္သေ့သငယ်၊ ဆူအောင်ကျွေးသော အကောင်တို့သည် အတူသွားလာကြ၍၊လူသူငယ်သည် သူတို့ကို ပို့ဆောင်လိမ့်မည်။
Il suo ruggito è come quello di una leonessa, ruggisce come un leoncello; fremeeafferra la preda, la pone al sicuro, nessuno gliela strappa
Poiché così mi ha parlato il Signore: «Come per la sua preda ruggisce il leone o il leoncello, quando gli si raduna contro tutta la schiera dei pastori,enon teme le loro grida né si preoccupa del loro chiasso, così scenderà il Signore degli eserciti per combattere sul monte Sionesulla sua collina
similiaun leone che brama la preda,aun leoncello che si apposta in agguato
ဘမ်းမိသောအကောင်ကို စားချင်အားကြီး သော ခြင်္သေ့ကဲ့သို့၎င်း၊ ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ချောင်း၍ နေသောခြင်္သေ့ပျိုကဲ့သို့ ၎င်းဖြစ်ကြပါ၏။
portantoj (Esperanto>Französisch)polineuropatie (Italienisch>Norwegisch)genus (Deutsch>Litauisch)verbrauchsteuerermäßigung (Deutsch>Französisch)party ki tabiyat kharab hai (Hindi>Englisch)hotsync (Afrikaans>Hebräisch)appelle (Französisch>Latein)its so difficult (Englisch>Tagalog)durchmesser (Deutsch>Polnisch)slower than you used to be (Englisch>Griechisch)aer (Dänisch>Maltesisch)public riot (Englisch>Griechisch)napaka tanga ko (Tagalog>Englisch)alofa at (Samoanisch>Englisch)awak tengah buat apa (Malaysisch>Chinesisch (Vereinfacht))combien d?annã©es (Französisch>Englisch)mendampingimu (Indonesisch>Schwedisch)tumaas ang mga balahio (Tagalog>Englisch)calumniam (Latein>Englisch)eukb (Ungarisch>Englisch)exarsit (Latein>Chamorro)streg (Dänisch>Englisch)fido promiscuo (Italienisch>Englisch)combien yat til d'arbres? (Französisch>Englisch)kata seerti bagi bersemangat (Malaysisch>Englisch)